laacib » Kooxda Manchester United oo bedelka Matteo Darmian ka soo qaadanaysa dalka Spain
Kooxda Manchester United oo bedelka Matteo Darmian ka soo qaadanaysa dalka Spain
Sida wararku ay sheegayaan laacibkii kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay bartilmaameedsanayso difaaca naadiga Valencia ee Jose Luis Gaya, si ay ugu bedelato booska uu bannaynayo Matteo Darmian oo lagu wado inuu ku biiro Juventus.
Red Devils ayaa la fahamsan yahay inay aqbashay in Darmian uu ka tago laacibkii dhammaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii uu difaacan reer Talyaani uu wadar ahaan u ciyaaray 847-daqiiqo tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Warsidaha Tuttosport ayaa soo jeedinaya in Gaya uu bartilmaameed sare u yahay macallin ose Mourinho, iyadoo xiddigan xulka qaranka Spain ee 21-jirada uu u saftay laacibkii Valencia 29 kulan xilli ciyaareedkan 2017-18.
Man United ayaa kaliya samaynaysa habka rasmiga ah oo ay ku soo qaadan lahayd 22-sano jirkaan marka uu Darmian ka dhaqaaqo, taasoo macnaheedu yahay in tartan ka socdo meelo kale.
Gaya ayaa inta ugu badan xirfaddiisa ciyaareed ku qaatay Los Che, waxaana uu ka soo baxay Akadeemiyada laacibkii sanadkii 2012-kii, iyadoo uu saftay in ka badan 100 kulan oo horyaalka ah tan iyo markaas.